NGC 104 - ဝီကီပီးဒီးယား
အိုမီဂါ စင်တောရိပြီးလျင် 47 Tucanae သည် ကောင်းကင်တွင် အတောက်ပဆုံးဖြစ်သည်။
00° 24′ 05.67″
၁၆.၇၀ ± ၀.၈၅ kly (၅.၁ ± ၀.၂၆ kpc)
အိုမီဂါ စင်တောရိ ပြီးလျင် ဒုတိယအတောက်ပဆုံး globular cluster
47 Tucanae (NGC 104) သည် globular cluster ဖြစ်ပြီး ကြယ်စုတန်း တူကင်နာတွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းသည် အလင်းနှစ် ၁၆၇၀၀ ခန့် ကမ္ဘာမြေမှ ဝေးကွာပြီး အလင်းနှစ် ၁၂၀ ကျယ်ပြောသည်။ သာမန်မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်ပြီး မြင်သာသောအရွယ်အစားမှာ ၄.၉ ရှိသည်။
NGC 104 သည် အိုမီဂါ စင်တောရိပြီးလျင် အတောက်ပဆုံး globular cluster ဖြစ်ပြီး ပင်မအူတိုင်တွင် အင်မတန်သိပ်သည်းကာ တောက်ပနေသည်။ ယင်းသည် ဂလက်ဆီထဲတွင် ကြယ်ပေါင်း မီလီယံချီကာ တည်ရှိသည့် globular cluster တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော မက်ဂျစ်လန်တိမ်တိုက်နှင့် နီးကပ်သယောင်ထင်ရသော်လည်း မက်ဂျစ်လန် တိမ်တိုက်သည် အလင်းနှစ် ၂၁၀၀၀၀ ဝေးကွာသောကြောင့် ရုပ်ပိုင်းအားဖြင့် မနီးစပ်လှပေ။ ဟာဘယ် အာကာသ တယ်လီစကုပ်အား အသုံးချကာ ယင်းအနားတွင် ဂြိုဟ်များတည်ရှိမှုအား ရှာဖွေသော်လည်း တည်ရှိမှုလက္ခဏာအား မတွေ့ရပေ။ ယင်းအချက်အရ globular cluster များတွင် ဂြိုဟ်များတည်ရှိမှုသည် အင်မတန်ရှားပါးသည်ဟု ညွန်ပြနေသည်။
47 Tucanae ၏ ပင်မအူတိုင်နားတွင် blue straggler ကြယ်များ အနည်းဆုံး ၂၁ ခုရှိသည်။ X-ray ပင်ရင်းများလည်း တည်ရှိသည်ဟု ညွန်ပြသည်။ ဟာဘယ် တယ်လီစကုပ်၏ အချက်အလက်များအရ တွင်းနက်တည်ရှိသည်ကိုမူ မတွေ့ရပေ။
↑ Retirement in the suburbs။ 12 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ SIMBAD Astronomical Database။ Results for NGC 104။ 2006-11-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Distances, Ages, and Epoch of Formation of Globular Clusters" . The Astrophysical Journal. doi:10.1086/308629. Bibcode: 2000ApJ...533..215C. Retrieved on 2008-11-12.
↑ Marks၊ Michael; Kroupa၊ Pavel (August 2010)၊ "Initial conditions for globular clusters and assembly of the old globular cluster population of the Milky Way"၊ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society၊ 406 (3): 2000–2012၊ arXiv:1004.2255၊ Bibcode:2010MNRAS.406.2000M၊ doi:10.1111/j.1365-2966.2010.16813.x. Mass is from MPD on Table 1.
↑ ၇.၀ ၇.၁ Forbes၊ Duncan A.; Bridges၊ Terry (May 2010)၊ "Accreted versus in situ Milky Way globular clusters"၊ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society၊ 404 (3): 1203–1214၊ arXiv:1001.4289၊ Bibcode:2010MNRAS.404.1203F၊ doi:10.1111/j.1365-2966.2010.16373.x.
↑ A Shortage of Planets။ 20 August 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "NASA's Hubble Space Telescope Finds "Blue Straggler" Stars in the Core ofaGlobular Cluster"၊ Hubble News Desk၊ 1991-07-24။ 2006-05-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "High-Resolution X-ray Imaging ofaGlobular Cluster Core: Compact Binaries in 47Tuc" (2001). Science 292 (5525): 2290–2295. doi:10.1126/science.1061135. PMID 11358997. Bibcode: 2001Sci...292.2290G.
↑ "Hubble Space Telescope Proper Motions and Stellar Dynamics in the Core of the Globular Cluster 47 Tucanae" (2006). Astrophysical Journal Supplement 166 (1): 249–297. doi:10.1086/505692. Bibcode: 2006ApJS..166..249M.
↑ Hubble finds evidence of multiple stellar populations in globular cluster 47 Tucanae။ Image Gallery။ ESA/Hubble။ 15 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် 47 Tucanae နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=NGC_104&oldid=688189" မှ ရယူရန်